Ndeapi matanho ekudzivirira ekudyara mumusika wemasheya? | Ehupfumi Zvemari
Ndeapi matanho ekudzivirira ekudyara mumusika wemasheya?
Zviratidzo zvese zveiyo nyowani 2019 yemusika wemusika kosi zvirokwazvo hazvikurudziri uye zvinoratidza zvirinani kuti kusagadzikana kuchave kuripo mumisika yemakero, kusvika padanho hombe kana shoma. Zvisinei nekuti iyo Bankinter yekuongorora dhipatimendi inonongedza kuti mukati megore idzva iri kudzikira kwenzira yemusika wemasheya unodzikira uye fungidziro dzavo dziri mupfungwa yekuti pachave nekuwedzera purofiti yakatenderedza 5% sezvo ivo vachitenda kuti iyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, ichasvika 9.200 mapoinzi pakupera kwegore.
Munharaunda yakajairika umo pasina kushomeka kwevaongorori vezvemari vari ivo vane maonero ekuti misika yemasheya iripo panguva ino zvakanyanyisa kurangwa uye hazvigone kutongwa kunze kuti kuchave nekudzokeresa mukukoshesa kwemusika uno wezvemari wakakosha Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Chero zvazvingaitika, hapazove nesarudzo kunze kwekungwarira zvikuru mukuita kunofanirwa kuitwa kubva zvino zvichienda mberi.
Iwe haugone kukanganwa kuti zvakare pakupera kwegore ra2017 nyanzvi dzemusika wemasheya dzakauya kufanotaura kuti gore idzva rinenge rakanaka kwazvo kune zvinzvimbo mumisika yemari. Uye zvinoitika kuti pakupedzisira rave riri rimwe remakore akaipisisa kune vashoma nevapakati varimi. Nekudzikira muIbex 35 iyo yanga iri pamatanho epedyo kwazvo pa15%. Izvi zvinoreva kuti, ivo vakundikana zvine mutsindo mukufungidzira kwavo kwekudyara uye zvinotungamira varimi kuti vashamisike kana zvakafanana hazvigone kuitika panguva ino.
1 Maitiro ekudzivirira: ndeapi?
2 Maitiro avo mumisika
3 Akanyanya kusimbiswa zvikamu
4 Chikamu chemagetsi
5 Mamwe matunhu anodzivirira kwazvo
6 Kunze kwekusimbisa mutemo
Maitiro ekudzivirira: ndeapi?
Imwe yematanho ayo vatengesi vese vanofanirwa kuendesa kunze kuti vatore zvakanyanya kuchengetedzwa kunozivikanwa sekudzivirira kana kuchengetedza. Iri zano rinoshanda kwazvo ku Zvidzivirire kubva mukusagadzikana mumisika yemari. Iri kirasi rekuchengetedzwa rinozivikanwa zvakanyanya nekuti maitiro aro ari nani pane mamwe ese panguva dzakaipisisa pamusika wemasheya. Kana musika wemasheya uchisimuka ivo havaite kudaro nesimba rakadai, asi kana maquity akaderera hazviite nemhirizhonga yakadai mukudonha kweiyi tsika.
Chimwe chezviratidzo zvaro zvikuru zvinoenderana nekuti iwo hunhu zvakanyanya kushanduka kuti vamwe. Mune mamwe mazwi, misiyano iri pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi haina kukwirira uye nekudaro njodzi kune vashoma nevapakati varimari yakaderera. Kunyangwe panjodzi yekutadza kutora mukana wekukwira mumisika yemari. Asi sezvo isu tiri kutaura nezve isina kunaka mamiriro emisika yemasheya zvakajairika, zvinogona kutaurwa kuti iwo anonyanya kukosha maitiro kuva nawo mune yako portfolio. Ivo vanopa kumwe kugadzikana kwariri shure kwezvose.
Maitiro avo mumisika
Masheya ekudzivirira kana anochengetedza anowedzera kusiyaniswa nehukuru hwavo hwekugona gadzira mari zvakadzikama kana zvishoma kugadzikana mune yepakati nepakati yakareba. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti inowanzo kupa yakatarwa, kunyangwe iri miniscule, purofiti gore rega. Semhedzisiro yeichi chakasarudzika, aya marondedzero akanyatsorongedzwa anokurudzirwa zvakanyanya kwenguva yakareba yekugara apo chinangwa ndechekugadzira yakatsiga mari yekuchinjana pasina kusagadzikana kwemamwe makambani akanyorwa pamusika wemasheya.
Kune rimwe divi, chikamu chakanaka cheaya maitiro chinogovera zvikamu pakati pevashandi vayo. Nekudzoserwa kwekudzoka kwegore negore kunosiyana pakati pe4% uye 7% zvichienderana nezano rakasarudzwa nevashandisi. Mari ichaenda kuaccount account yeva investor aya pamazuva avo ekubhadhara uyu mubairo. Chero zvazvingaitika, inogona kushandiswa seyakanyanya uye hunyanzvi zano rekugadzira kana kuvaka portfolio yemari yakatarwa mukati meiyo kusiana. Zvekuti nenzira iyi, vashoma uye vepakati varimi vane mari yakatarwa gore rega kuti vasangane nemari yavo huru.
Akanyanya kusimbiswa zvikamu
Iri kirasi rezvivigiro zvemasheya, kune rimwe divi, rinozivikanwa zvikuru nekuti rinobva kumakambani ane tsika dzechinyakare uye pamusoro pemitsetse yese yebhizinesi. Izvo hazvitsamire pamatanho ehupfumi uye zvinopa kukosha izvo zvinowanzodikanwa nechikamu chikuru chevagari. Semuenzaniso vanogona kuva magetsi ekupa masevhisi kana kubvumidzwa kwemigwagwa mikuru, pakati pezvimwe zvakakosha. Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti ivo vanopa chengetedzo huru kune vashoma nevepakati varimi. Mukupesana neaya anonzi ekufungidzira ekuchengetedza ayo asingape chero yakawedzera kukosha.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti izvi zvirevo mumisika yemari zviri chikamu chemari yekudyara kwevamwe mari dzepasi rese kana mamaneja nechinangwa chekuvandudza mapato avo ekudyara. Kune kwavanogadzira mari yemudyandigere uye mune iyi kesi vanowana rombo rakakura nekuda kwekudzikama mumitengo yavanopa mune mazhinji kesi. Ivo chikamu chakakosha kwazvo cheizvi zvigadzirwa zvemari uye mune chero zvazvingaitika pamusoro izvo zvinopihwa nemamwe machengetedzo akabatanidzwa mumakesi emasheya epasi rose.
Kana tichitaura nezve aya akasarudzika maitiro, hatigone kukanganwa makambani emagetsi ayo ari iwo anodzivirira tsika par kugona. Ivo vane kugadzikana kukuru mukugadziriswa kwemitengo yavo uye ndivo zvekare vanobhadhara imwe yeiyo zvikamu zvepamusoro mumusika wemari. Iine avhareji uye wepagore mubereko unogona kusvika kusvika ku7%, pamusoro pazvo zvinoratidzwa nezvose zvigadzirwa zvebhangi. Semuenzaniso, yakatarwa-nguva dhipoziti, mabhangi ekuvimbisa manotsi kana maakaundi anobhadhara zvakanyanya. Ndekupi kuri kuenda, kune rumwe rutivi, chikamu chakanaka chekuchengetwa kwevashandisi vebhangi nekuda kwekushomeka kwezvipo mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari.
Chikamu chemagetsi chikamu chakakurumbira nevashambadzi vadiki nepakati nepakati vane hunhu hwakanyanya. Iko kuchengetedzeka kwekudyara kunokurira pamusoro pedzimwe pfungwa, kusanganisira mhindu yechigadzirwa chaicho. Semhedzisiro yemaitiro aya, kugoverana kwemakambani aya kuri zvakare yakasimba kwazvo uye hapana fungidziro pazvinhu zvacho. Mukufamba kwenguva inogara iri nyore kuita purofiti inobatsira pane kumwe kuchengetedzeka. Kunyangwe ivo vasina kuregererwa kubva kunjodzi nekudzikira mukukoshesa kwemitengo yavo.
Mamwe matunhu anodzivirira kwazvo
Chero zvazvingaitika, chikamu chemagetsi handicho chete chinodzivirira mumusika wemasheya. Kwete zvakanyanya kushoma, asi kune vamwe vanosangana neichi chakakosha hunhu. Nekuti imwe yeakanyanya kukosha ndeyekudya kune hunhu huri nani mumamiriro akaomesesa emisika yemari. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti ivo vanopa chigadzirwa chakakosha kuvanhu uye nekudaro chinoda kutengwa. Kunyangwe iwe uri munguva yekuderera kwehupfumi kana, zvinopesana, mune imwe yekuwedzera. Nekuti zvirizvo, izvo zvinodiwa zvinoramba zvakafanana uye nekuda kweichi chikonzero ivo vanonyanya kunakidza kwenguva dzekugadzikana kukuru mumisika yemari.
Kune rimwe divi, haugone kutonga iyo banking sector kunyangwe pamutengo wekufungidzira yakawanda njodzi mukushanda. Kunyanya mumakore achangopfuura semhedzisiro yekuratidzwa kwayo kukuru kumatambudziko ezvehupfumi, sezvakaitika mune imwe yakagadziriswa pakati pa2007 na2008. Nemaitikiro ari nani pane mamwe eseji ekuchengetedza anoita indices huru yemusika wemasheya pasi rese. Kusvika padanho rekuti ivo vawana zvinonakidza zvinodzoka mune yekupedzisira, mune imwe nhanho inotangira kubva pa2% uye kusvika gumi muzana muzana mune akanakisa kesi. Iko makambani ekugovera chikafu akabatanidzwawo.
Kunze kwekusimbisa mutemo
Chaizvoizvo muboka iri rekupedzisira, iro remakambani ekugovera chikafu, iri Día kuchengetedzeka kwakaipisisa muna 2018 uye kwaive padhuze nekutengesa 0,20 euros pamugove. Kusiya muchiitwa ichi rondedzero yakasarudzika yeSpanish equities, iyo Ibex 35 uye kuti makore mashoma apfuura apfuura akauya kuzotora mazwi mashanu kana matanhatu euros. Kupunzika mumutengo kubva kune iwo chaiwo nguva. Iyi kukosha inomiririra yakasarudzika kune yakajairwa maitiro evamiriri ava mumisika yemari.
Chero zvazvingaitika, zvirinani zvichave zvakajeka kubva ikozvino zvichienda kukosha kwekudzivirira. Ungatofanira kuenda kune chimwe chazvo kuti utarisane negore rakaomarara sezvichaita 2019.Pasina kana mubvunzo kuti uchafanirwa kunge uchinyanya kusarudza kuti uve neyakaenzana mari yekudyara kuti uzvidzivirire pakukanganisa kwe misika yemari Ndokunge, shure kwezvose, chii chiri pamusoro pekuita kuchengetedza kunobatsira nenzira yakachengeteka. Imwe yezvishuwo zvegore rino izvo zvichangobva kutora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeapi matanho ekudzivirira ekudyara mumusika wemasheya?
Maitiro matsva uye madonhwe paMadrid Stock Exchange
Zvikamu zvishanu zvemasheya zvinogona kuita zvirinani mu2019